Realme GT, choro igbatu onu uzo nke di elu [Review] | Gam akporosis
Realme GT, chọrọ ịkwatu ọnụ ụzọ nke ụlọ elu-elu [Nyochaa]
Dị ka ị maara nke ọma, anyị na-arụkọ ọrụ Realme ebe ọ bụ na ọbịbịa ya na Europe, mgbe anyị gara mmemme mbụ ya na Madrid ma anyị nwee ike ịmatakwu ịdị ukwuu nke echiche Realme iji gbalịa ịbụ «egwuregwu na-agbanwe» n'ihe gbasara ogo na ọnụahịa nke ngwaahịa.
Realme GT ọhụrụ bịara na njirimara ngwụcha dị elu yana ọnụ ahịa nwere oke iji kwado onwe ya dịka nhọrọ dị mma na 2021 a. Ka anyị lebara anya na Realme GT ọhụrụ a, atụmatụ ya ma ọ bụrụ n'ezie na ọnụ ọnụ a bụ Realme nwere ike iguzo na Samsung, Apple na Oppo ebe ha kacha chebe onwe ha, ekwentị "elu".
Dị ka oge niile, anyị na-ahapụrụ gị vidiyo na elu ebe ị ga-enwe ike ile anya nyocha anyị, ebe ọ bụ na anyị anwalela Realme GT ọhụrụ a izu ole na ole.
1 Akara nke aka ya
2 Nka na ụzụ: Ọ dị ihe na-efu anyị?
4 Nnwere onwe na foto
5 Mkpebi anyị
Akara nke aka ya
Realme ekpebiela ịkụ nzọ na imepụta ihe eji amata nke ọma iji mara na anyị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ mbinye aka, mana emechara nke ọma iji mee ka ọ dị adị. Anyị nwere ntakịrị akụkụ gbara gburugburu, etiti plastik nke yiri ọla, na iko iko nke na-abata n'anya anyị. Anyị nwere ike inweta ya na isi atọ dị iche iche bụ ọla ọcha / kristal, odo na nnukwu nwa ojii ahụ nke na-echetara anyị banyere igbu Bill, na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị gosipụtara. Dị ka ọ dị na mbụ, akụkụ azụ nwere ọchịchọ pụrụ iche ijide egwu anyị.
N'aka m, ụdị edo edo nke akpụkpọ anụ vegan dị egwu, ntụgharị na-atọ ụtọ nke na-eme ka enwere mmetụta mgbe m chọpụtara na e ji plastik mee etiti ahụ.
Na Spain ọ nwere ike zụta ya na odo na acha anụnụ anụnụ
Anyị nwere akụkụ nke 158 x 73 x 8,4 n'ihi na a nnọọ ìhè dị arọ nke naanị gram 186, ihe ijuanya na-atụle otu panel nke fọrọ nke nta 6,5 sentimita asatọ. Na aka ọ na-enwe mmetụta dị ịtụnanya na ọ dị mma n'agbanyeghị akụkụ ya. Na ihu anyi nwere “freckle” a kpochapuru na elu aka ekpe nke n’eme ka igwe foto nke onwe di elu iji igwe n’ule. Dị ka ọ dị na mbụ, anyị nwere nchekwa nchebe gụnyere na igbe ahụ, ihe na-abata mgbe niile.
Nka na ụzụ: Ọ dị ihe na-efu anyị?
O doro anya na anyị na-eme ka a mara nke ọma Qualcomm Snapdragon 888 5G, nke a ga-esonyere ya na nsụgharị nke 8 ma ọ bụ 12 GB nke LPDDR5 RAM na nchekwa nke ọsọ kachasị na 128 ma ọ bụ 256 GB nke UFS 3.1 ebe nchekwa nke na-eme ka nnyefe data dịkwuo mma.
Nka na ụzụ nkọwa Realme GT
Usoro njikwa A gam akporo 11 + Realme UI 2.0
Ihuenyo SuperAMOLED 6.43 "FHD + (2400 * 1080) na 120 Hz ume ọhụrụ na 1000 nits
Nhazi Qualcomm Snapdragon 888 5G
Igwefoto na-aga n'ihu Sony 64MP f / 1.8 IMX682 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP nnukwu f / 2.4
Igwe n'ihu 16MP f / 2.5 GA 78º
Njikọ Bluetooth 5.0 - 5G DualSIM- WiFi 6 - NFC - IR - GPS abụọ
Batrị 4.500 mAh na Ọsọ ọsọ 65W
Anyị nwere ikike WiFi 6 na 5G na sistemụ Dual obi abụọ adịghị ya na nke ahụ ga-atọ ụtọ nke kachasị achọ. Na ule anyị, ọnọdụ okpomọkụ a na-achịkwa nke ọma nke ọma Usoro mkpofu VC nke Realme tinyeworo na njedebe ya, otu n'ime ngalaba nke juru anyị anya nke ukwuu.
Nnwale anyị na-arụ ọrụ Ọmarịcha 5G Ha enweela oke oke nyere ụkọ nke ụdị mkpuchi a n'oge nyocha.
Anyị nwere otu panel Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6,5-inch SuperAMOLED na-anapụta nits 1000 nits kacha mma na ezigbo adaba dịka ahụmịhe anyị si eji. Anyị nwere 120 Hz ume ọhụrụ nke o doro anya na-emetụta oriri nke nnwere onwe. Ume ume ọhụrụ maka ogwe aka bụ 360 Hz yabụ na akụkụ a ahụmịhe ahụ ka elu. Iji chịkwaa nchapụta ma bulie nnwere onwe, Realme etinyela ihe mmetụta ọkụ ọkụ abụọ na eziokwu bụ na ha gosipụtara ịzaghachi nke ọma maka mkpa ọkụ ọkụ nke ọnụ. Na ihuenyo itinye n'ọrụ metụrụ 92% na akụkụ a Realme GT rụzuru nke ọma.
Ahụmahụ anyị dị mma, n’otu aka ahụ, n’ihe banyere ụda, anyị hụrụ ike zuru oke na nghọta doro anya iji nwee ike ịnụ ụtọ ojiji ya n’agbanyeghi ụda “teknụzụ” adịghị.
Nnwere onwe na foto
Banyere batrị, Ọ na-arịgo 4.500 mAh na ụgwọ ngwa ngwa nke Realme na-agbaziri site na Oppo, anyị nwere 65W na chaja SuperDart nke etinye n'ime igbe. Nke a na-enye anyị ohere isi na ya pụọ 0% gaa na 100% na naanị 35 nkeji, nke yiri anyị ka ọ bụ nzọ dị ụtọ n'oge ndị a. Ọnụ ahụ na-eji ohere njikarịcha nke nnwere onwe, ma na-ebelata nchapụta na ume ume, ụzọ nchekwa dị iche iche yana ụgwọ a na-agbanwe agbanwe site na USB-C OTG na mmepụta nke 2,5W. N'ime ule anyị, nnwere onwe eruola otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị na ọkara nke ojiji na-enweghị nsogbu, agbanyeghị na-achịkwa ọchịchọ na egwuregwu vidio na ọnụego ume ọhụrụ nke ihuenyo.
Banyere ihe mmetụta, N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ewetara gị nyocha miri emi nke igwefoto yana ule zuru oke, ugbu a anyị “emepe ọnụ gị” yana nkọwa ya na echiche mbụ anyị:
Sony IMX682 isi ihe mmetụta nwere oghere 64MP na f / 1.9 nke mpempe isii
8MP Ultra Wide Angle Sensor na oghere mpempe f / 2.3
2MP nnukwu ihe mmetụta nwere oghere atọ f / 2.4
Anyị nwere ọrụ eji arụ ọrụ dịka Super Night Ọnọdụ nke anyị ga-ekwu maka ya n’ime ule anyị miri emi, anyị nwere olile anya na ịgaghị atụfu ya. Anyị nwekwara ike idekọ vidiyo ruo 4K 60 FPS ya na nkwado ya.
Realme 5G a bụ eziokwu na ọnụahịa na-enweghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla, anyị na-atụfu ụgwọ wireless Qi, anyị agaghị aghogbu onwe anyị, mana ọ dị anyị ka ọ bụ naanị nkọwa dị iche na ya dị iche na ọdụ "Premium". Ihe nrịba ama nke Realme UI ejirila ụfọdụ bloatware kpuchie anyị na ntọala anyị, ma arụmọrụ na ọsọ ọsọ na egwuregwu ọ bụla na-achọ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla bụ obi ọjọọ. Ekwentị anaghị ekpo oke ọkụ, ihe na-eme n'oge a na ọdụ ndị ọzọ.
Enweghi m olile anya na "onye na - egbu egbu" nke anyị na - emecha na - anụ kwa afọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ọnụ ahịa ọnụ ahịa Realme GT a, Ọ na-esiri m ike ịbanye na ndị ọzọ na Samsung na ụfọdụ ndị ọzọ sitere na Xiaomi. Realme emeela mkpebi siri ike na "elu" dị na GT a, Egwuregwu ahụ ọ ga-aga nke ọma? Anyi ka kwesiri ime "nyocha nke owu", ule igwefoto nke anyi gha achoputa ma nke a Realme GT nwere ike igwa gi ihe banyere gi na iPhone 12 Pro ma obu Galaxy S21 Ultra. Echefula nkọwa nke weebụsaịtị anyị na ọwa YouTube n'ihi na ị ga-anụ n'ọnụ anyị n'oge na-adịghị anya.
Relalme GT 5G> Ahịa
8 + 128: 449 euro na onyinye (onye ọrụ gọọmentị 499)
12 + 256: euro 499 na onyinye (onye ọrụ 549 euro)
Anyị ga-enwe onyinye pụrụ iche na Amazon, weebụsaịtị Realme Ma n'ezie na AliExpress ruo na June 22, nọrọ na-ekiri.
Ọhụrụ na-ewu ihe na ihe na-eche adịchaghị
Ọtụtụ ike na ọsọ na-enweghị ọkụ
Charginggba ụgwọ ngwa ngwa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ cheeky
Ọnụahịa nke na-ahụkarị etiti / elu dị elu
Igwefoto dị ọtụtụ ma enwere ike ịkwalite
Enweghị ụgwọ Qi
Blofọdụ bloatware na Realme UI 2.0
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Realme GT, chọrọ ịkwatu ọnụ ụzọ nke ụlọ elu-elu [Nyochaa]
Esi edozi koodu mmeghe 910 na Storelọ Ahịa Play
Ngwa 6 kachasị mma iji detuo ihe na gam akporo